Rayson | omatilasi baka-leon neziphethu zebhokisi
I-Rayson Spring Manufacturer Manufacturer ilandela ngokuqinile i-ISO9001 yohlelo lwesitifiketi sekhwalithi yamazwe ngamazwe ukuze iphathe futhi ilawule inqubo yokukhiqiza.
Ngamandla aqinile e-R&D nekhono lokukhiqiza, uRayson manje usephenduke umkhiqizi ochwepheshile nomphakeli onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu okuhlanganisa omatilasi baka-leon neziphethu zebhokisi kukhiqizwa ngokusekelwe ohlelweni oluqinile lokuphatha ikhwalithi kanye namazinga omhlaba. omatilasi baka-leon neziphethu zebhokisi Besitshala imali eningi emkhiqizweni we-R&D, okuvele ukuthi uyasebenza ukuthi sithuthukise omatilasi baka-leon neziphethu zebhokisi. Ngokuthembela kubasebenzi bethu abasungula izinto ezintsha nabasebenza kanzima, siqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, amanani avumayo kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Siyakwamukela ukuthi usithinte uma unemibuzo.Umkhiqizo ungagqokwa isikhathi eside futhi ngeke udatshulwe ngenxa yokuthi unemithungo eyanele eqinile.